Canyon Creek Cabins: #2 - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguForest And Andy
UForest And Andy yi-Superhost
Le ndlwana incinci yababini ibekwe kumda wegranite, ejonge umlambo obalekayo. Iqulethwe zizakhiwo ezibini ezincinci ezidityaniswe yidekhi. Isakhiwo sokuqala sisiqulathi sokuthumela esiguquliweyo esinekhitshi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, kunye nepatio yangaphandle. Isakhiwo sesibini sinekhabhathi yokulala epholileyo, igumbi leglasi lelanga, kunye neziko lamatye. Ibhafu eshushu ibekwe kwihlathi elijonge umlambo, ifikeleleka ngendlela ekhanyisiweyo.
Ikhabhathi yiyure enye ukusuka eSeattle, kwaye imizuzu nje ngaphandle kweGranite Falls, WA. Le ndawo isoloko ibhekiswa njengesango leCascades, kwaye ikhabhinethi yimizuzu engama-20 nje yokuqhuba ukuya kwezinye zezona mpawu zintle zokunyuka intaba kunye nezona mpawu zintle zendalo ezinokuthi zinikwe yiWashington. Ezinye zeendlela zethu ezizithandayo ziquka: i-Gothic Basin, i-Big Four Ice Caves, i-Mt. Pilchuck Fire Lookout, i-Lake lamashumi amabini anesibini, kunye ne-Heather Lake.
Iikhabhinethi zethu zikwindawo encinci neyabucala. Ngelixa sikhuthaza iindwendwe ukuba zityelele ipaki ekufutshane kwaye zijonge iindlela ezikwiCascade Loop Highway, sicela iindwendwe ukuba zincede ziyeke ukubhadula kwiindlela zabucala zabahlali, njengoko abamelwane bexabisa ukuba bucala kwabo.
Ngaba uyazivumela izinja? - Ewe. Sinobuhlobo nezinja, kodwa musa ukuvumela ezinye izilwanyana zasekhaya.
Ndingangena kwangethuba okanye ndiphume kade? - Hayi. Iikhabhinethi zethu zihlala zibhukishwa ngasemva, kwaye abacoci bethu bafuna ixesha lokulungiselela ikhabhinethi yondwendwe olulandelayo. Akukho ndawo ilungileyo yokuxhoma ngelixa ukucocwa kugqityiwe ngoko ke kungcono ukuba ufike ngexesha lokungena.
Yintoni ekhitshini? - Ikhitshi lincinci kwaye ligcwele izinto ezisisiseko: i-stovetop, i-microwave, iimbiza, izitya, iziqholo, iimpahla ezomileyo. Inye into ekufuneka uyithathele ingqalelo xa ucwangcisa ukutya kwakho kukuba akukho oveni kule khabhathi, nangona kunjalo sinayo i-BBQ grill.
Ithini imeko yekofu? - Sigcina ikofu yeStamp Act, igrinder yombane, kunye nentsimbi ye-french press kwi-cabin.
Yeyiphi indawo yokutyela elungile okanye ibha ekufutshane? - Sincoma ukuchitha ixesha elininzi kwikhabhinethi nakwindalo kangangoko kunokwenzeka. Ke, cwangcisa ukuza nokutya kunye neziselo kunye nawe. Iintandokazi zasekhaya edolophini ziquka i-Omega pizza (i-pizza ye-takout kunye neesaladi) kunye ne-Spar Tree (ibha yendawo).
4.83 · Izimvo eziyi-104
Umbuki zindwendwe ngu- Forest And Andy
Izimvo eziyi-1 637